Webtrends oo Bilaabay Muuqaal Macluumaad Weyn leh Webtrends Explore | Martech Zone
Talaado, Febraayo 24, 2015 Sabtida, Janaayo 14, 2017 Douglas Karr
Waxaan nahay taageerayaal waqti dheer ah Webtrends hogaamiye ahaan Analytics adeeg bixiye shaqo weyn ka qabta labadaba muuqaalaynta xogta iyo bixinta macluumad ficil u ah macaamiisheeda. Kooxda wax soo saarka ee Webtrends ayaa fiiro gaar ah u leh dhibcaha xanuunka casriga ah ee suuqleyda maalmahan iyagoo bilaabay soo bandhigiddooda cusub. Webtrends Baadh:
CMOs sidoo kale si weyn looma diyaarin si ay ula wareegaan mugga sii kordhaya, xawaaraha iyo xogta kala duwan.
In ka badan saddex-meelood laba meel ayaa rumeysan inay u baahan doonaan inay maal-gashadaan qalab iyo teknoolojiyad cusub, ayna horumariyaan istiraatiijiyado cusub oo lagu maareeyo xogta weyn.
Webtrends Explore waa codsi loogu talagalay sahaminta xogta ad-hoc. Barxadku wuxuu adeegsadaa tikniyoolajiyadaha Macluumaadka Weyn laakiin wuxuu leeyahay interface isticmaale aan u baahnayn horumariye inuu wax weyddiiyo soona bandhigo xogta aad ugu baahan tahay inaad ku gaarto go'aannada habboon. Marka laga reebo inaan loo baahnayn wax horumar ah ama jahwareer, Webtrends Explore wuxuu bixiyaa 3 faa'iidooyin waaweyn:
Fududaato in la isticmaalo si aad u hesho jawaabo markii aad u baahatid.
Aragti toos ah kanaalka Safarka macaamiisha waa la furay.
Qeybtii duulimaadka iyo carbinta aan xadidnayn.
Tani waxay siin doontaa suuqgeeyaashu aragti weyn oo ku saabsan safarada macaamiisha ee aaladaha iyo kanaalada, waxay u suurta gelineysaa shirkadaha inay bixiyaan khibrad macmiil oo soo jiidasho leh oo joogto ah, kordhinta dabacsanaanta, xawaaraha iyo waxtarka inta lagu jiro falanqaynta dabeecadaha internetka ee qaybaha kala duwan ee macaamiisha, iyo hagaajinta jawaab celinta si hagaaji ololeyaasha ama khibradaha macaamiisha dhaqan xumo lama filaan ah ama cilado la arkay awgood.
Safarka macaamilku wuxuu u kordhay inuu noqdo mid aad u adag, oo ka tagaya suuqleyda iyadoon haysan qalab sax ah oo ay ku xiraan dhibcaha guud ahaan dhibcaha taabashada macaamiisha. Baadhitaan ayaa ka dhigaya isku xidhkaas, oo awood u siinaya sumadaha inay weydiiyaan su'aalo ku-meel-gaadh ah oo ku saabsan xogtooda oo ay jawaabo ku helaan markiiba. Macaamiisheenna, oo ay ku jiraan Lufthansa iyo Dabeecadda Dabeecadda, ayaa hadda u adeegsanaya inay ku soo bandhigaan fikradaha ugana jawaabaan su'aalaha xilligan ay soo baxaan. Maamulaha Webtrends Joe Davis
Soo bandhigida Webtrends Baadh
Webtrends Explore wuxuu u shaqeeyaa asxaab Webtrends Falanqaynta Baahida, kordhinta xog ururinta aan xadidnayn iyo awoodaha falanqaynta iyada oo la adeegsanayo sahaminta xogta ad-hoc ee xoogga badan.
Tags: ka-warbixinta ad-hocwarbixinta falanqayntaqaybinta falanqayntaxog weyniskutallaabtaSafarka macaamiishacarbintahadoopduulista duulimaadkaqaybintawebtrends sahamiyaan
Ceros: Abuur Mawduuc Is-dhexgal Qurux badan oo aan lahayn Horumar